Serivisy sy mpamatsy Lumenis M22 tsara indrindra. Hongyu
M22 ™ dia sehatry ny rindranasa maodely marobe ho an'ny fitsaboana ny hoditra sy ny fanesorana volo mihoatra ny 30.
Nampiasain'ny mpitsabo eran'izao tontolo izao, ny M22 ™ dia ahafahanao mitsabo marary sy marary maro karazana miaraka amin'ny valiny tena tsara.
Teknolojia marobe 4 amin'ny rafitra maodely tokana
M22 ™ dia mitombo amin'ny fampiharana anao
Manitatra ny filanao fitsaboana ary mampifanaraka ny fampiharana amin'ny ho avy rehefa mipoitra izany.
Teknolojia pulse optimum (OPT ™)
Tanana tokana misy sivana sy jiro azo ovaina
Ho an'ny fitsaboana amin'ny hoditra IPL mampiasa photorejuvenation
Ny hany fizarazaran-tena tsy misy ablative, miaraka amin'ny scanner CoolScan ™
Tsy misy fanary
Ho an'ny famerenana amin'ny hoditra indray
Ny kinova M22 misy premium miaraka amin'ny AOPT dia hita ao Shina izao!
Ny M22 ™ Universal IPL izao dia ampiarahina amin'ny AOPT, ahafahana mifehy tanteraka ny mpampiasa mandroso, izay manamora ny fampifanarahan'ny tsirairay ny toe-javatra ho an'ny marary tsirairay sy ny toe-pahasalamany tsirairay. Ampiasao tsara ny pulsa tsirairay ary manomeza valim-pitsaboana mitohy sy mafy orina ho an'ireo marary!
Miaraka amin'ny famolavolana tsipika volamena, Lumenis dia manolotra am-pireharehana ny kinova M22 premium, miaraka amin'ny fitsaboana mazava sy azo antoka ary mahomby amin'ny laser sy amin'ny tsenan'ny fitsaboana estetika.
M22 ™ Universal IPL Module dia ahafahanao mitsabo toe-javatra marobe amin'ny alàlan'ny tanana iray tokana sy marobe.
Ny sangan'asa Universal IPL dia namboarina niaraka tamin'ny 9 ExpertFilters ™ namboarina tamin'ny fepetra raisina sy ny fankasitrahana ny sivana amin'ny alàlan'ny solosaina ho fampivoarana ny fiarovana sy ny fampiasana mora kokoa. Miovà amin'ny tànana Universal IPL hanova ny ExpertFilters ™ ao anatin'ny segondra fa tsy hametaka ny sanganasa vaovao.
Ny sangan'asa Universal IPL dia tsy mamonjy fotoana fitsaboana sy toerana fitehirizana fotsiny, fa mandany vola be koa satria tsy mila mividy sanganasa IPL marobe. Mpitari-jiro SapphireCool ™ telo, ho an'ny faritra lehibe sy madinidinika, hampitombo ny fiononan'ny marary amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fifandraisana.
Nd: Laser YAG Miaraka amin'ny Teknolojia Pulsing Sequential Multiple Sequential Pulsing
Ny modely Nd: YAG an'ny M22 ™ dia manolotra fitsaboana amin'ny telangiectasias, hemangiomas, lalan-drà ary ketrona amin'ny tarehy. Fitsaboana marina sy ahazoana aina miaraka amin'ireo mpiambina finday miisa 4 miova sy mora miova. Multiple Sequential Pulsing, izay misy amin'ny modely Nd: YAG sy IPL ao amin'ny M22 ™, dia ahafahana mihena eo anelanelan'ny fizotran'ny pulses, hiarovana ny epidermis ary mamela ny fampiasana azo antoka tsara kokoa. Izany dia ahafahan'ny fitsaboana amin'ny karazana hoditra rehetra, ao anatin'izany ny hoditra maizimaizina, ary mampihena ny voka-dratsin'ny voka-dratsy tsy ilaina amin'ny fitsaboana lesoka vaskola.
Ny angovo maivana dia entina mandritra ny pulsa, ary ny tavy dia mihamangatsiaka mandritra ny fahatarana. Ny angovo bebe kokoa dia atolotra soa aman-tsara amin'ny tanjona.
Inona no ataony
Ny Pulsing marobe marobe dia mamela ny fampangatsiahana eo anelanelan'ny pulses mba hanesorana soa aman-tsara ny volo amin'ny karazana hoditra rehetra ao anatin'izany ny hoditra mainty kokoa ary hampihena ny voka-dratsin'ny hoditra amin'ny fitsaboana lesoka vaskular.
ResurFX ™ Ny maodely ResurFX ™ an'ny M22 ™ no hany haitao tsy miova abra-dia. Pass iray ihany no ilaina.
Tsy toy ny teknolojia sombin-javatra hafa, ResurFX ™ dia mila pass iray monja mba hahomby, mamonjy fotoana sy miaro ny hoditry ny marary.
ResurFX ™ dia mampiasa laser fibre 1565 nm ary scanner tena mandroso, izay ahafahanao misafidy mihoatra ny 600 ny endrika, ny habe ary ny hakitroky ny fitsaboana sahaza indrindra.
ResurFX ™ Miaraka amin'ny CoolScan ™ Ho an'ny fitsaboana tsara indrindra
Ny maodely ResurFX ™ dia manana scanner CoolScan ™ tsy manam-paharoa ho an'ny fizahana tsy misy filaharana. Ny algorithm patanty miandry dia mametraka ny toerana sombiny tsirairay amin'ny fomba voafehy mba hiarovana ny sela amin'ny fanangonana hafanana sy ny hafanana be loatra. Ity fahaiza-manao ity dia miavaka amin'ny laser fibres ResurFX ™ 1565nm. Ny sangan'asa ResurFX ™ dia misy famafana fifandraisana tsy tapaka, hampitomboana ny fampiononan'ny marary mandritra ny fitsaboana.
Teo aloha: HydraFacial MD